Ogaden News Agency (ONA) – Maxaa ka raacay Safiirka Itobiya baroordiiqdii lagu qabtay Sudan iyo nifaaq-amaankii Meles
Maxaa ka raacay Safiirka Itobiya baroordiiqdii lagu qabtay Sudan iyo nifaaq-amaankii Meles
Posted by ONA Admin	/ September 1, 2012
Waxaa magaalada Khartum ee caasimada dalka Sudan (University Of Khartoum) lagu qabtay Khamiistii ay tariikhu markay ahayd 30/8/2012 nadwo ( dood cilmiyeed) lagaga hadlayey dhimashadii Zinaawi iyo saameynta ay ku yeelan karto Geeska Africa oo ay siwada jira u qabteen saxiifad layidhaahdo (aakhir laxda ) iyo urur dhalinyaro oo lagu maga caabo ( ururka dhalinyarada Carabta iyo Africa ) oo uu fadhigisu yahay Khartoum.
Waxaana ka soo qeyb galey safiirka gumeysiga ee Sudan iyo TV gumeysiga oo si toos ulalin hayey dhacdada shirka waxaa iyana ka soo qeyb galay dadbadan oy kamid yihiin ardeyda Ogadeniya iyo Soomali waxaa iyaduna aan meesha ka maqney oo xaadir ahayd Safaarada Masar iyo Koonfurta Sudan waxaana layaab lahayd in aan midna hadalka la siinin. Waxaan ka maqnayn warbaahinta qeybeheeda kala duwan ee wadankan Sudan waxaana ka hadley madasha NADWADA dhawr nin oo kala ah: 3 safiir oo kala socday UN-ta ninka u fadhiyay Sudan iyo Safiirka Sudan u fadhiyijiray Adis ababa. Dhamantood waxey iska daba mareen inuu ahaa nin hogaamiya ah oo kabaxey Africa gaarahaan G/Africa xidhiihd fiicana lalahaa dawlada Sudan aadbey ugu dheeraadeen amaantiisa in kasta oy mararka qaarkood xusayeen in lagu eedeyey tacadiyo.
Kadibna waxaa hadley safiirkii gumaysiga oo isaguna ku dheeradey wax qabadkii KT Zinaawi waxaa kaloo uu ka hadley iney EPRDF ku socon doonto wadadii uu ujeexey Zanaawi balse wuxuu qirey ineyna isagii oo kale dib u heleynin.
Markii lasoo gaadhey falanqeyntii NADWADA ayaa waxaa gamcaha taagey ardadii Ogadenia waxaana nasiib ugu helay inay hadlaan laba arday oo sifiican ugu cadeyey dadkii meesha fadhiyay dhibaatadii uu ku hayey shacabka Ogadeniya, Soomaliya iyo shucuubta kale ee uu gumeysan jirey dhiigya cab Zanaawi iyo gumaadkii uu u geystey ee dhinacwalba lahaa shacabka Itobiya guud ahaan. Waxay kaloo canaan kulul u soo jeediyeen nimankii Sudan-ta ahaa ee meesha kahadley oy u sheegeen inay marwalba la jiraan gumeysiga Itoobiya, waxayna u cadayeen in ay ka hormariyeen walaal tinimadii iyo islaanimadii ay lawadageen umada somaliyeed iyo tii Carab-tinimada kana hor mayiyeen xidhiidhka yar ee ka dhaxeeya Itoobiya iyo Sudan.
Runtii hadalka ay radyada ka jeediyeen Nadwada wuxuu gilgiley hollkii shirka waxaana isbadaley qaabkii uu wax u socdey oo dhan. Sudan-tii soo qaban-qaabiyay aadbey u fajeceen sababtoo ah meyna fileyn cid xumaan ka sheegeysa Zinaawi iney mesha fadhido, hasa ahaatee dadkii meesha fadhiyay ayaa aad ula dhecey hadalka ay ardayda Ogadenya ka jeediyeen goobta oo intaba run ahayed.
Kadib markay dhamaysteen ardadydii hadalkoodii ayaa dib loogu celiyey safiirkii gumeysiga si uu dooda ardayda uga jawaabo, wuxuuna isagoo aad u cadheysan dib u bilaabey hadalkisii isagoo ku dheeraadey Ogadenya dagaalka ka socda oo uu leeyahay iyaga xagooda in ay diyaar u yihiin wada xaajood balse ONLF ayna diyaar u ahayn in xal laga gaadho oo luqada kaliya ey ku hadlaani tahay qoriga afkiisa. Waxaa kaloo uu fuuley ree Galbeedka oo uu ku tilmaamey iney xumeyn hayaan sumcadii zinaawi ooy ku tilmaameen inuu danbiyo dagaal gaystey taasna waxaa keentey buu yidhi anaga iyo iyaga oo ku kala duwan aragtida iyo qaab maamulka wadanka. Waxaa kaloo uu ka hadley Eretria oo uu sheegey in Itobiya ay rabaan iney kuwada noolaadaan jaar wanaag laakin iyagu ineyna rabin arintaas isagoo hadalkiisa sii raaciyey waxay rabaan iney iyaga kaligood faa iidaan dadkakalana khasaaraan.
Isku soo duu duuboo waxaa shaley gumeysiga karaacey shirkaas ceeb uuna fileynin waayo shirka waxaa loogu talagaley baroordiiq ee ma ahay NADWO la isku weydaarsan hayo fikrado kala duwan markii uu shirki dhamaadeyna dhamaan dadki meesha fadhiyey marka laga reebo gumaysiga iyo dhawrkii safiirada ahaa waxay u wada Hanbalyeyeen aradaydii Ogadenya ee ka hadashay Nadwada waxaana kamida ahaa hadaladoodii ( waxaa tihiin geesiyiin qadiyadiina ha la cabsanina oo sidii aad maanataba u sheegteen meelwalba uga sheega.